Mukhtaar Roobow oo la sheegay inuu mar kale iska difaacay weerarkii Al-Shabaab · Jowhar.com Somali News Leader
Mukhtaar Roobow oo la sheegay inuu mar kale iska difaacay weerarkii Al-Shabaab
by A M | Saturday, Aug 12, 2017 | 7385 views
August 12 (Jowhar)— Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar mar kale Al-Shababa shalay ku qaaday aagga uu ku sugan yahay wadaadka gooni u goosadka ah Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Dagaalkii shalay oo ahaa mid xooggan ayaa la sheegayaa in maleeshiyada taabacsan Abuu Mansuur ay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab ku soo qaaday.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu ku fiday goobo hor leh oo ka tirsan Gobolka Bakool, iyadoo maleeshiyada taabacsan Mukhtaar Roobow ay jilbaha dhulka u dhigteen weerarkii lagu soo qaaday, iskana difaaceen.
Saraakiil ka tirsan maamulka Koofur Galbeed oo si dhow xaalada dagaalka ula socda ayaa sheegaya in maleeshiyada taabacsan Mukhtaar Roobow ay difaacyo adag ka sameysteen dhulka howdka iyo buuraha ee deegaanka Abal, taas oo u sahashay inay dib isaga riixaan Shabaabkii soo weeraray.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Koofur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo la hadlay Idaacada VOA ayaa sheegay dagaalkii shalay uu ka dhacay Tuulo lagu magacaabo Sayalow oo u dhow deegaanka Abal, isagoo tilmaamay in dagaalka uu ku sii fidayo goobo hor leh.
“Maalmahan deegaanka Abal oo hoos taga Xudur iska hor imaadyo ayaa ka jiray oo u dhaxeeyay Al-Shabaab iyo Mukhtaar Roobow, dagaalkii shalay saacado ayuu socday, waxaa lagu dagaalamay meel la dhaho Sayalow oo dhowr KM u jirta Abal, waa deegaan howd iyo buuro ah”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Koofur Galbeed.
Waxaa uu sheegay in dib mar kale loo caabiyay ciidankii duulaanka soo qaaday, laguna jebiyay dagaalka sida uu hadalka u dhigay.
Illaa iyo hada waxaa adag warar faah faahsan oo ku aadan dagaalka, iyadoo halka lagu dagaalamayo ay tahay deegaan fog oo aanay warbaahinta ka ag dhowaan karin, si ay u hesho macluumaad la xiriira dagaalka.
Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa u muuqata in waqti dheer ku soo qaadaneyso sidii ay ku soo afjari laheyd Wadaadka ka fallaagoobay ee Mukhtaar Roobow oo horay uga mid ahaa Saraakiisha ugu sareysa Kooxda, waxaana la sheegayaa inuu wadaadka helayo taageero kala duwan iyo maleeshiyaad aad u fara badan taabacsan.
Lama oga halka uu ku dambeyn doono dagaalkan u dhaxeeya Mukhtaar Roobow iyo Al-Shabaab, iyadoo wali aanay suura gelin in wadaadka uu isku soo dhiibo dowladda Soomaaliya.
Maamulka Gobolka Banaadir oo saaka dib u furay waddo sababo amni u xirneyd
Xildhibaanada Hirshabeelle oo wada olole ka dhan ah Madaxweyne Cosoble